Abuur kaararka ganacsiga: sida loo sameeyo talaabo talaabo talaabo ah | Abuurista khadka tooska ah
Samee kaararka ganacsiga
Mid ka mid ah qaababka lagu soo bandhigo ganacsatada, shirkadaha, kuwa madaxbanaan iyo qof kasta oo bixiya adeeg ama wax soo saar waa kaar. Waana abuurista kaararka ganacsiga, iyo adeegsiga, maanta aad ayey u fududahay waxayna ku siinaysaa fursad kuwa kale inay ku helaan xogtaada si ay kula soo xiriiraan haddii ay kuu baahdaan.
Laakiin si aad u hesho dareenka dadkaas, waxaad u baahan tahay inaad sameysatid kaararka ganacsiga ee run ahaantii saameynaya oo aan ahayn wax u dhigma kuwa dadka kale. Sidaa darteed, maanta waxaan dooneynaa inaan diirada saarno inaan ku siino fikrado aad ku hesho kaarka ganacsiga ugu fiican ee furaya fursadaha shaqo.
1 Xogta ay tahay inaad sameyso kaararka ganacsiga
2 Talaabo talaabo ah si loo abuuro kaararka ganacsiga
2.1 Saldhiga kaarka ganacsiga
2.2 Xogta marka la sameynayo kaararka ganacsiga
3 Halka laga abuuro kaararka ganacsiga
Xogta ay tahay inaad sameyso kaararka ganacsiga
Kahor intaadan fikradaha ku siin, si ay kaaga caawiso inaad ogaato sida loo abuuro kaararka ganacsiga, waa inaad ka fekertaa xogta aad u baahan tahay inaad ku jirto kaarkaas. Maskaxda ku hay in aadan dhigeynin dhammaan xogta aad rabto, maadaama boosku uu kooban yahay.
Badanaa, waxa badanaa la dhigaa waa:
Magaca iyo magaca qoyska. Ama magaca shirkadda. Waa hab qofka kale loogu sheego qofka aad tahay ama qofka aad u shaqayso. Haddii aad iskaa u shaqeysato ama ay tahay kaar ganacsi shaqsiyeed, magacaaga ayaa si weyn ugu xambaari doona. Haddii shirkad la wakiisho, waxaa suurtagal ah in magaca shirkaddu uu marka hore baxo oo adigana aad la socoto booskaaga ku yaal halkan hoose.
Telefoon. Xaaladdan oo kale, khadka tooska ah ayaa lagu soo daray laakiin sidoo kale mobilada. Mararka qaar, waxaad dhigeysaa kaliya taleefankaaga gacanta sababtoo ah ma joogtid meel go'an oo iska ilaali in laguu yeero oo aadan awoodin inaad ka jawaabto lambarkaas, waxaad kaliya dhigeysaa meesha aad had iyo jeer ka heli karto.
E-mayl Iyadoo la tixgelinayo in tiknoolajiyada cusubi ay sameeyeen farqi aad u muhiim ah, waa wax iska caadi ah kaararka ganacsiga inay yeeshaan emayl ay kula soo xiriiri karaan (maadaama ay jiraan dad aan jeclayn taleefanka laakiin wax qora).
Bog Web ah. Sidoo kale waa suurtagal in lagu daro kaararka ganacsiga maaddaama aad albaabka u fureyso inay ku ogaadaan astaantaada internetka.
Jihada. Hagaag haa, tusaale ahaan cinwaanka shirkadda, meheraddaada ... Ka soo qaad in aad leedahay rootida rootida. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato halka ay ku taallo si ay kuugu yimaadaan adiga. Waa isku mid haddii ay shirkad tahay, tusaale ahaan warshadaha alwaaxda, waa inaad sheegtaa meesha aad joogto si haddii ay wax u baahdaan ay u tegi karaan goobtaas (oo aan ku soo wicin inaad weydiiso).
Xog kale. Xogta kale ee lagu bixin karo kaararka ganacsiga waa shabakadaha bulshada, astaan ​​ama sawir wakiil ganacsi (tusaale ahaan, astaanta), iwm. Hadda waa mooddo in lagu daro lambarrada QR kuwaas oo ah kuwa oggolaanaya, mar haddii ay diiradda saaraan moobiilka, u kaxee degel websaydh ah, ha noqoto shabakad bulsheed, websaydhka shirkadda, ganacsiga ama qofka, iwm.
Sida iska cad, dhigida xogtaan oo dhan waa suurto gal hadii ay jirto boos ku filan kaarka, laakiin qaadashada xog aad u badan laguma talinayo sidoo kale. Waxaa la doorbidaa in diirada la saaro kaliya waxa ugu muhiimsan oo la tuuro kuwa kale. Iyo sida loo doorto mid ama tan kale? Ka fikirida sawirka aad rabto inaad bixiso. Tusaale ahaan, isku mid maahan haddii aad u shaqeysid sida qoraa khadka tooska ah (halka aan loo baahnayn in la dhigo cinwaanka meheraddaada laakiin bog internet iyo emayl), in laga shaqeeyo akadeemiyadda tababarka, halkaas oo ay tahay inaad sheegto halka aad yihiin iyo lambar taleefan xiriir.
Talaabo talaabo ah si loo abuuro kaararka ganacsiga
Markaad go'aamiso xogta aad galinayso, markaad samaynayso kaararka ganacsiga waa inaad raacdaa dhawr talaabo si aad u hesho natiijada ugu fiican. Kuwanuna waa kuwan soo socda:
Saldhiga kaarka ganacsiga
Xaaladdan oo kale, waa inaadan kaliya diirada saarin waxa asalka noqon doono, xaga midabka, naqshada, iwm. laakiin sidoo kale cabirka kaarka. Ma jiro cabbir sax ah oo loogu talagalay kaarka ganacsiga; waxaad dhab ahaan dooran kartaa dhowr, ka weyn ama ka yar. Waxay kuxirantahay xogta aad rabto, kan sare ama kan hoose ayaa noqon kara mid xiiso leh. Laakiin, si aan fikrad kuu siiyo, waa inay noqotaa cabir si fiican ugu habboon boorsada ama boorsada jeebka, taas oo aan ka soo bixin ama aan dhib ahayn in lagu dhejiyo kaararka kaararka ee ay kuwaani leeyihiin.
Ogaanshaha cabirka, waa inaad diirada saartaa inaad rabto asalka inuu noqdo midab gaar ah, inuu yeelan doono sawir, astaan, astaan ​​... Oo ku meelee aag ku habboon (iyadoo kuxiran hadday rabto inay istaagto ama aan la ogaan).
Xogta marka la sameynayo kaararka ganacsiga
Marka xigta waa inaad gashaa xogta. Waxaan kugula talineynaa inaad iyaga wada geliso ka dibna aad la ciyaarto si aad u bedesho meeshooda, cabirkooda, iwm. si loo arko sida ay ugu fiican tahay. Kaadhadhka ugu caansan badanaa waxay leeyihiin magaca qofka iyo cinwaanka ku yaal bartamaha halka taleefanka iyo emaylka ay aadayaan dhinacyada. Laakiin waxaan horeyba kuugu sheegeynaa inuusan jirin sharci qoran. Waad sameyn kartaa sida ay ugu habboon tahay ganacsigaaga ama shakhsiyaddaada.
Muhiimadda tan ayaa ah in qofka haysta kaarkaagu uu ku xusuusto adiga oo waliba aad soo jiidato dareenkooda.
Markaad abuureyso kaararka ganacsiga, xuduudaha aad ayey muhiim u yihiin. Waana mid ka mid ah khaladaadka la sameeyay inay tahay in xoogaa xog ah la dhigo meelaha ka baxsan geesahaas, si marka wax loo daabacayo loo jaro oo aan waxtar lahayn.
Sidaa darteed, markaad dhisto cabirka, waxaa muhiim ah inaad abuurto gees si aadan uga tagin booskaas oo wax walboo muhiim ah ay gudaha ugu jiraan.
Halka laga abuuro kaararka ganacsiga
Waad ogtahay xogta aad rabto inaad gasho, talaabooyinka ay tahay inaad qaado, laakiin… iyo halkee laga abuuraa? Xaqiiqdii, sameynta kaararka ganacsiga uma baahna bog gaar ah, sidoo kale uma baahna qof shaqada qabanaya. Adiga ayaa sameyn kara adiga oo isticmaalaya barnaamijyo ama bogag kala duwan. Tusaale ahaan:
Erey. Waa tan ugu badan ee loo isticmaalo abuurista kaararka ganacsiga "guriga lagu sameeyo", laakiin leh natiijooyin wanaagsan. Waxa kaliya ee xoogaa xadidan.
Photoshop. Ama barnaamij kasta oo tafatirka sawirku wuu ku caawin karaa (tusaale ahaan, Gimp). Waxaad sameyn doontaa si la mid ah sida ku jirta Ereyga, oo keliya fursado badan marka la eego dib-u-hagaajinta sawirka aad aasaaska u dhigtay.
Websaydhada. Xaaladdan oo kale waxaa jira laba nooc, kuwa bilaashka ah iyo kuwa la bixiyay. Hubso sababta oo ah qaar iyaga ka mid ah ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid kaarka laakiin markaa ma daabacan kartid qiimaha ay ku leeyihiin jir ahaan waa mid aad qaali u ah.
Codsiyada. Ugu dambeyntiina, waxaad ikhtiyaar u leedahay barnaamijyada moobiilka ee kuu oggolaanaya inaad sameysid kaarka ka dibna aad soo dejiso si aad ugu dirto emaylkaaga (ama xitaa aad ku daabacato iyaga).
Hadda oo aad dukumintiga ku haysato kaarkaaga ganacsiga, maxaad ku qabataa? Waxaad haysataa fursado dhowr ah:
Waad ku daabacan kartaa guriga haddii aad haysato warqad qaro weyn oo tayo leh (oo daabacahaagu u oggolaado).
Waad ku daabacan kartaa shirkadaha sameeya kaararka ganacsiga. Waxay siiyaan mashiinadooda si ay u daabacaan naqshadaha aad sameysay.
Waad ku daabacan kartaa madbacadaha. Dhammaantood maahan, laakiin qaarkood waxay leeyihiin mashiinno ku daabacan kara noocyo kala duwan oo waraaqo ah culeysyo kala duwan, oo ay u dheer tahay inay leeyihiin guillotine ama jarayaal ka jaraya kaararka markii la daabaco
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Samee kaararka ganacsiga
Adobe Premiere Pro, Premiere Rush iyo Audition ayaa hadda loo heli karaa Apple M1 Systems ee beta